Home Aragti-doon 9 astaamood oo muujinaya in maskaxda aad ka xanuunsan tahay
Astaamaha lagu garto qof maskaxda ka jiran.
Sida lagu garto cudurada dhimirka... PHOTO: Unsplash
Xanuunada maskaxda la xiriira way ku soo badanayaan caalamka – walwalka illaa waalida – wax ka baro astaamaha muujinaya xanuunada dhimirka si aad u caawiso qofkii aad ku aragto arrimahan.
Inta badan ma ahan isbedel keliye, balse waa arrimo is uruursada. Sagaalka arrimood ee hoos ku xusan, waxaa dhici karta in aysan ahayn kuwa keliya ee lagu qiimeeyo cudurada maskaxda, balse waa qeyb aad wax badan ka ogaan karto.
Ma kala garan kartaa farqiga u dhexeeya shucuur xun iyo arrin halis ah?
Astaamahan waxaad ku arki kartaa qof aad jeceshahay, ka dib waa in aad caawisaa qofkaas.
Dareenka walwalka iyo walbahaarka
Dadka oo dhan way walwalaan ama walbahaaraan mararka qaar. Balse walbahaarka saa’idka ah wuxuu astaan u noqon karaa xanuun maskaxeed – waa haddii uu joogto noqdo, aadna danahaaga ka qabsan waydo.
Astaamaha kale ee Walbahaarka, waxaa qeyb ka noqon kara wadne-garaac, neef-tuur badan iyo madax-xanuun. Waxaa kale oo aad isku arki kartaa dhidid, jir-gariir, daal, nasasho-la’aan iyo maskaxda oo noqota sida in ay ku wareeganeyso.
Walaac, niyad-jab iyo farxad-la’aan
Astaamaha walaaca xun waxaa qeyb ka ah murugo ama xanaaq oo muddo isbuucyo ah ku haya – niyad-jab, daal saa’id ah, ama in aad sameyn waydo wax aad jeceshahay iyo in aad dagaal uun dooneyso markasta.
Qiiro iyo shucuur aan xasillooni lahayn
Qof kasta wuxuu leeyahay shucuur iyo qiiro u gaar ah, balse shucuurta iska soo boodka ah, sida walbahaar wadne-garaac ah leh ama xanaaq, waxay astaan u noqon kartaa xanuun dhanka maskaxda ah.
Isbedellada ku dhaca hurdada waxay astaan u noqon kartaa cudur dhimirka ah. Sida dhafarka, wuxuu calaamad u yahay walbahaar. Xitaa haddii ay hurdada kaa badato waa astaan muujineysa walwalka in uu kugu badan yahay.
Culeyska jirka ama wax cunkaaga oo isbedela
Dadka qaar, isbedbedelka culeyska jirkooda waa astaan diginin u ah xanuun maskaxda ah sida walbahaar. Waxaa la mid ah wax cunid xumo daran.
Quus ama keli ahaansho
In aad nolosha ka quusato ama isbedel wayn aad kala kulanto la noolaashaha dadka kale, waa xaalad caafimaad oo halis ku ah dhimirka. Qof aad jeceshahay haddii aad sidaa ku aragto, waa in aad si degdeg ah u caawisaa.
Qof si lama filaan ah u billaaba balwad waxay la mid tahay in xaalad maskaxeed ay haysato ama ay isku dhaafinayaan walwal iyo walbahaar. Balwadda ma ahan oo keliya maandooriye, waxaa ka mid ah aflaanta aadka loo daawado, isticmaalka telefoonka oo saa’id ah iyo wixii la mid ah.
In aad dareento dembi ama in aadan qiimo lahayn
In maskaxdaada ay ku soo dhacaan sida in aad fashilantay ama ku guuldareysatay nolosha – waxay la micno yihiin in maskax ahaan aadan wanaagsanayn. Waxaa suuragal ah in walwal uu ku hayo. Marka aad qof ku aragto in naftiisa uu ku tilmaamayo mid aan qiimo ku lahayn dunida, waa in aad ogataa in qofkaas u baahan yahay kaalmo iyo in loo geeyo dhakhtar maskaxeed.
Isbedelka dabeecadaha iyo dareenka
Xanuunada maskaxda waxay ku billaaban karaa isbedello daahsoon oo aadan dareemi Karin mararka qaar – waxaa ka mid ah dabeecadda, dareenka, qaab-fikirka iyo wixii la mid ah. Taas marka ay sii socoto, hal-mar ayey banaanka u soo bexeysaa, waana xilli ay xaaladda xumaatay. Haddii aad ogaato in ay wax kaa qaldan yihii, waxaa muhiim ah in aad la hadasho dhakhtar.
Previous article7 cunto oo sabab u noqon kara wadne-xanuunka loo dhinto
Next articleWax ka ogow shanta dabeecad ee ugu waaweyn